“၁၃၀၀ ပြည့်နှစ်က မန္တလေးက မြန်မာအာဇာနည်များခေါင်းချခဲ့တဲ့နေရာ” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » “၁၃၀၀ ပြည့်နှစ်က မန္တလေးက မြန်မာအာဇာနည်များခေါင်းချခဲ့တဲ့နေရာ”
“၁၃၀၀ ပြည့်နှစ်က မန္တလေးက မြန်မာအာဇာနည်များခေါင်းချခဲ့တဲ့နေရာ”
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Dec 24, 2011 in My Dear Diary, Myanma News, Photography | 34 comments
1 မန်းလေးစစ်ကိုင်းလမ်း တမ္ပ၀တီရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ မြန်မာ့သမိုင်းဝင် မန္တလေးအာဇာနည်ဗိမ္မာန်
2 သစ်ပင်ခြုံနွယ်ပိတ်ပေါင်းကတော့ တောထလို့နေပါတယ်။
3 တောထနေတဲ့အာဇာနည်များလဲလျောင်းရာနေရာ အတက်လှေကားလေး
4 ပိတ်ထားတဲ့ တံခါး က မှတ်တမ်း ဖတ်ရတာလွမ်းစရာ စာလုံးပေါင်းကတော့ မှားနေတယ်
5 ဒီလိုပစ်ထားမိတဲ့အတွက် ကျနော်လည်းနိုင်ငံသားတစ်ယောက်ဖြစ်တော့ အာဇာနည်တွေအပေါ်တာဝန်မကျေခဲ့မိတာကို ရှကိမိပါတယ်
6 ဒါကတော့ မြောက်ဘက်ခြမ်းက မှတ်တမ်း
7 အ၀င်လမ်းကလေး ပိတ်ထားတဲ့တံခါးနောက်မှာ သူတို့ အေးချမ်းစွာလဲလျောင်း
8 မှတ်တမ်း တင်ထားတဲ့စာ
မနက်က လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်တော့ ဂျာနယ်တွေချထားပေးတော့ ကောက်ဖတ်မိပါတယ်။
အခုခေတ်ဂျာနယ်တွေ အတော်အသင့်လွတ်လပ်ခွင့်ရလာပြန်တော့ အရင်က မမြင်ဘူးတာတွေမြင်ရ ၊
အဲဒီအထဲမှာ တစ်နိုင်ငံလုံးကချစ်တဲ့ ကမ္ဘာကအသိအမှတ်ပြုတဲ့ မြန်မာ့ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအကြောင်းကို မှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားမှာ ၀င်ပြိးသရုပ်ဆောင်ချင်တဲ့ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့မွေးနေ့ တူတဲ့
သူများလက်ချက်ကြောင့်ကွယ်လွန်ခဲ့လို့ အာဇာနည် အဖြစ်အခုထက်ထိတည်ရှိနေတာပါဘဲ။
မြန်မာပြည်ရဲ့ လွတ်လပ်ရေးသမိုင်းမှာ ကျဆုံးခဲ့တဲ့အာဇာနည်ပေါင်းများစွာရှိပါတယ်။
အထူးခြားဆုံးသော နှစ်ကတော့ မြန်မာတွေ နိုင်ငံအ၀ှမ်း နိုင်ငံရေးအသိစိတ်နိုးကြားခဲ့တဲ့ ၁၃၀၀ ပြည့်နှစ်။
ဒီနှစ်မှာဘဲ မန်းလေးက အာဇာနည် (၁ရ)ဦးလဲ ကျဆုံးကွယ်လွန်ခဲ့တာကိုသတိရမိပါတယ်။
သတိရဆို ကျနော်တို့ ငယ်ငယ်က နေခဲ့တဲ့ ၈၀-၈၁ကြား ၂၅လမ်းက ခုံတော်မင်းဝင်း(ခ)ကြေးနန်းဝင်းထဲမှာ အဲဒီတုန်းက ကျဆုံးခဲ့တဲ့ အာဇာနည်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရှိခဲ့လို့ပါ။
ကျနော်သိပ်ငယ်တော့ အဲဒီအဖိုးရဲ့နာမည်ကိုမမှတ်မိခဲ့သလို ငယ်ငယ်က အိပ်ယာဝင်ပုံပြင်လိုအ ဖွားပြောပြခဲ့လို့ 26ဘီလမ်း အခုအော်တိုဖုန်းရုံးရှေ့မှာ မြန်မာ့မျိုးချစ်သူရဲကောင်း ရဟန်းရောလူပါ (၁၇)ဦးကျဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတာထက်ပိုပြီးမမှတ်မိခဲ့တာတော့ ကျနော့ညံ့ဖျင်းမူ့ပါ။
အဲဒါနဲ့ငါတို့မန်းလေးမှာလည်း အာဇာနည်တွေရှိခဲ့ဘူးတာဘဲလို့ တွေးမိတာနဲ့သူတို့လဲလျောင်းရာနေရာကိုသတိရမိပါတယ်။
ဒါနဲ့ဘဲလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကထ ပြီး မန်းလေးအာဇာနည်ဗိမ္မာန်ရှိတဲ့နေရာကို အရောက်သွားခဲ့တဲ့အခါ…………………………………………..
လေးပေါက် သမိုင်းတစ်ချို့ တူးဆွနေသည်
ကိုပေါက် တို့ ရပ်ကွက် နဲ့အခု အာဇာနည် ဗိမ္မာန် နဲ့ က နီးတာကလား ဗျ
ကိုပေါက် တို့ ရပ်ကွက်ထိပ်မှာ မဏ္ဍပ်ဆောက် ၊ လော်တပ် ၊ စပီကာ တွေ နဲ့ မိုက်ခဲပြီး
အာဇာနည် ဗိမ္မာန် ပြန်လည်ပြုပြင်ရေး ဆိုပြီး ၊ ရပ်ကွက်လူကြီးများကသာ ဦးဆောင် အလှူခံပြီး ပြုပြင်သင့်ကြပါကြောင်း ။
မန်းလေးက အာဇာနည်ကုန်းကို လုံးဝမသိဘူးဗျို့။
ဓါတ်ပုံလေးတွေနဲ့ တင်ပေးတာ ကျေးဇူးပါဗျာ။
ကိုပေါက်ရေ…ကျေးဇူပါ..မန္တလေးမှာလည်း အာဇာနည်ဗိမ္မန်ရှိတာ အခုမှသိရတယ်…စိတ်မကောင်းစရာက ချုံနွယ်တွေပိတ်ဖုံးနေတာမြင်တွေ့ရတာပါ၊
မန္တလေးမြို့သူ၊မြို့သားများစုပေါင်းပြီး၊မြို့တော်ဝန်ကို ပြန်လည်ပြုပြင်ဖို့တင်ပြသင့်တယ်ထင်တယ်။ဒါမှ သမိုင်းဆိုတာ ဆက်လျှက်တည်ရှိပြီး နောင်လာမယ့်မျိုးဆက်တွေပါသိခွင့်ရနိုင်မယ်လို့မြင်ပါတယ်။
အခုလို သမိုင်းဝင် နေရာတွေကို အမှတ်တရ ရိုက်ထားတာကြောင့် အချိန်တွေ ကြာလာတာနဲ့အမျှ တန်ဖိုးရှိလာလိမ့်မယ် ထင်တယ်။
ရိုက်ထားတဲ့ပုံက တင်မယ်ဆိုရင် ဆယ့်ငါးပုံထိတင်လို့ရပါတယ်။
ညနေက တင်ရင်းတန်းလန်းကော်နက်ရှင်ပြုတ်ကျသွားတော့ ရသလောက်အမြန်တင်ပေးလိုက်ရတာပါ။
မသူတော်ူတွေက မလျှော်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေကြတယ်လို့ သိရလို့ပါဘဲ။
လေးပေါက်ရေ လေးပေါက်ပြောမှ သိရတော.တယ်ကျေးဇူးဗျာ.. ဘယ်လို.ကြောင်.အသက်ပေးခဲ.ရတယ် ဆိုတာလေးကို… အချိန်၇ရင် ပြောပြပေးပါဗျာ..
ရန်ကုန်မှာဗိုလ်အောင်ကျော်တို့ ကျဆုံးတဲ့အခါ မန်းလေးမှာလဲ ရဟန်းရှင်လူ ကျောင်းသားအားလုံးဆန္ဒပြပါသတဲ့။
အခု26ဘီလမ်း 80-81လမ်းကြားမှာ အင်္ဂလိပ် မြင်းစီးပုလိပ်တွေလက်ချက်ကြောင့်
ကျဆုံးခဲ့ရတဲ့ အာဇာနည် (17)ဦးပါတဲ့။
နောက်ပိုင်းမှာတော့ လွတ်လပ်ရေးမော်ကွန်းဝင်တွေအဖြစ် ဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီနေရာလေးကို အကြောင်းအမျိုးမျုိးကြောင့် အခုလိုပိတ်ထားခဲ့ပါတယ်။
ဖြစ်သင့်တာကတော့ ခြံနွယ်တွေရှင်းလင်းအစောင့်ထား နိုင်ငံခြားဧည်သည်များကို
ဒီနေရာလေးမှာကျဆုံးခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းကို ရေး
ကျဆုံးသူတွေရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေကို ချိတ်ဆွဲထား။
ကဲသူကြီးရေ အမေရိက က သူဌေးက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ရှင်အတွက်ကူညီမယ်ဆိုတော့
ဒီနေရာလေးကိုရော မကူညီချင်ဘူးလားလို့ ပြောပေးနော်
ဓါတ်ပုံတွေကို တကူးတကရိုက်ပြီး စိတ်ရှည်စွာ တင်ပေးလာတဲ့ ကိုပေါက်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ …. ဒါဟာလည်း အာဇာနည်တွေအပေါ် တာဝန်သိတတ်ခြင်း တမျိုးပါ … ဖြစ်နိုင်ရင် မန်းလေး မြို့တော်ဝန်ကို မေးလ်ပို့ ပြီး အသိပေးစေချင်ပါတယ် … ဒါမှမဟုတ်လည်း မန်းတောင်ရိပ်ကနေ ဖွလိုက်စေချင်ပါတယ် ….
ဆရာပေါက်လို သမိုင်းကိုရှာဖွှေပြီး အများသိအောင် ဖော်ထုတ်ပေးတာ အလွန်တန်ဘိုးကြီးပါတယ်ဆရာ။
ပန်းသတင်းလေညှင်းဆောင်သွားမယ်လို့ ယုံကြည်လို့ ဒီပုံကိုတင်ပါတယ်။
ဒီအာဇာနည် တွေ ခေါင်းချ ခဲ့တဲ့နေရာလေးကိုမြင်လိုက်ရတော့
ရင်ထဲမှာ နင့် နေအောင် နိုင်ငံသားတစ်ယောက် အနေ နဲ့ တာဝန်မကျေသလိုခံစားရပါတယ်။
ကိုပေါက် ဒီပုံတွေကို လျက်တစ်ပျက်(ဓါတ်ပုံဦးစားပေးလို့ပါ) မှာ ပို့ပေးပါလား
ဒါမှမဟုတ် ပြည့်သူ့ခေတ် ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။မြန်မာတိုင်းမစ်ဖြစ်ဖြစ်။ ရန်ကုန်တိုင်းမစ်ဖြစ်ဖြစ်။
သူတို့ ဂျာနယ်တွေက ပြည်သူ့ပါးစပ် ဖြစ်နေကြတယ်။
ဘတ်ဂျက်မရှိရင်တော့.. လူထုကအလှူငွေထည့်ပြီး လုပ်ရတာပါ..။
စေတီပုထိုးတွေ အသစ်အသစ်တွေဆောက်.. ရှိပြီးသားတွေ.. လိုအပ်တာထက်ပိုပိုပြီးမွန်းမံ လုပ်ကြတာထက်စာရင်.. လူထုက.. လှူနေတဲ့..ငွေတွေ.. အဲဒီလိုနေရာမျိုးတွေမှာဦးစားပေးလှူသင့်လှပါတယ်..။
ခက်တာက ကျနော်တို့ ဆီမှာက ဒီလိုက်ိစ္စမျုိးဆိုရင် အလှူခံရတာခက်တယ်။
တိုင်းပြည်တိုးတက်စေပြီး..နိုင်ငံတော်သစ်တည်ထောင်ချင်ရင်.. ဘာကိုဦးစားပေးလုပ်ရမယ်ဆိုတာ.. မသိသာလွန်းဘူးလား..။
မန္တလေးကိုလာတိုင်း အာဇာနည်ကုန်းဘေးနားက ဖြတ်သွားနေကျပါ
ဘယ်လို အာဇာနည်လဲတော့ ကောင်းကောင်းမသိခဲ့ဘူး ။
ခုတော့ သိပါပြီ ကိုပေါက်ရေ …………..
အောင်ပင်လယ်ကန်ဘက်ရော ပုံတွေ တင်ထားရင် ကြည့်ချင်ပါတယ်။
ကနောင်မင်း ရေမြုပ်ဗုံးစမ်းခဲ့တာဆိုတော့ စိတ်ထဲမှာ အာသီသရှိနေတယ်။
တိကျတဲ့ သမိုင်းကြောင်းတွေနဲ့ မှတ်တမ်းတွေ အများကြီး ရှိတာပဲ.. အထိန်းအမှတ်တွေကလည်း ပိန်းပိတ်နေတာတော့ မလှဘူး။ နောက်ပိုင်းအဲဒါတွေကို ပြစားလို့ ရတယ်။
နိုင်ငံခြားသားတွေ စိတ်ဝင်စားစရာ သမိုင်းနောက်ခံနေရာလေးဖြစ်လာနိုင်သလို၊
ဒါလေးကိုဖတ်မိတဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူ လုပ်နိုင်သူက အကောင်အထည်ဖော်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ အတိုင်းထက်အလွန်ပါဘဲ။
ကိုပေါက်ရေ အဲဒီနေရာ ရှိတယ်ဆိုတာ ကြားတောင်မကြားဖူးဘူး။ ကိုပေါက်တင်ပေးတာကျေးဇူးပါ။ ကွန်ပျုတာတစ်လုံးရှိရင် မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ ဗဟုသုတရှိရုံမက။ နိုင်ငံတကာပါသွားနိုင်တယ်ဆိုတာ သိသွားတယ်။ တကယ်တကယ်။ မန်းလေးရောက်ရင် အဲဒီနေရာလေးကို သူငယ်ချင်းတွေလိုက်ပြခိုင်းမယ်။
ဒါပေမယ် မြန်မာနိုင်ငံက ခေတ်မမှီတဲ့လူကြီးတွေက အင်တာနက်ဆိုတာနဲ့
နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေး ထစ်ခနဲရှိ အော်တတ်တဲ့ စစ်တပ်လက်ထက် မစစ်တပ်လက်တွေမှာ ဒီလိုသံဃာ့အာဇာနည်အုတ်ဂူများကို ပစ်ပယ်ထားတာ တိုက်ဆိုင်မှုတခုတော့ မဖြစ်တန်ရာဘူး။ ကျောင်းသားတွေနဲ့ ပတ်သက်ရင် သမဂ္ဂအဆောက်အအုံ၊ လူတွေနဲ့ပတ်သက်ရင် ခေတ်အဆက်ဆက် သမိုင်းဝင်လူထုလှုပ်ရှားမှုများ၊ စစ်တပ်နဲပတ်သက်ရင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဒါတွေအားလုံးကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ဖုံးကွယ်မေ့ဖျောက်ထားကြတာ….။
ကိုပေါက်ရေ မန္တလေးမှာ ဒီလိုသမိုင်းဝင်နေရာ ရှိတယ်ဆိုတာကို အခုမှ ကြားဖူးတာပါ။ မန္တလေးကို ခဏခဏ ရောက်ပေမယ့် ဒီလိုနေရာ ရှိတယ်ဆိုတာ တကယ်မသိတာပါ။ နောက်တစ်ခါရောက်ခဲ့ရင် သွားဖြစ်အောင် သွားလိုက်ပါဦးမယ်။ အခုလို ဖော်ပြပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင် လေးစားစွာဖြင့်……………..။
“မန်းအာဇာနည် ၁၇ ဦး ဗိမာန် သန့်ရှင်းသပ်ရပ်ရေး ပရဟိတအသင်းများ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားမည်” by Popular Myanmar News Journal
“၁၃၀၀ ပြည့် အရေးတော်ပုံတွင် ကျဆုံးခဲ့သော အာဇာနည် ၁၇ ဦး၏ အထိမ်းအမှတ် ဗိမာန်အား ပြန်လည်သန့်ရှင်း သပ်ရပ်ရေး ဆောင်ရွက်မည်” by eleven news journal
ကိုပေါက်ရေ..အလဲဗင်းမှာ ဒီသတင်းလေးဖတ်လိုက်ရတော့ ၀မ်းသာအားရလာမန့်တာ.ဆရာသမားကသိပြီးသားကိုးး
ဒါနဲ့ ဘာကြောင့်အနီတွေပေးထားတာလဲ နားမလည်နိုင်ဘူးဗျာ..
ကျနော်ကြောင့်လို့ မဆိုနိုင်ပေမယ့် ကိုယ် စိတ်ကူးနဲ့ကိုယ်လုပ်တာလေးနဲ့
တကယ်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သူ တိုက်ဆိုင်သွားကြတာပါ
အခုလို သတိတရနဲ့သတင်းပေးတာ ကျေးဇူးပါ။
ကျနော်လဲ သူများလာပြောပေးလို့ သိလိုက်ရတာပါခင်ဗျာ။
ကိုပေါက်ရေ။ အမတ်မင်း ရဲ့ ကွန်းမန့်လေးက နည်းနည်းစောသွားတယ်ဗျာ။
သက်ရောက်မှု တစ်စုံတစ်ရာ ရှိမှာပါဗျာ။
ကိုပေါက်အတွက် အင်အားသစ်တစ်ခု ဖြစ်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
အနီတွေကတော့ ….. ။
ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဗျ ရဲရဲတောက် တို့မန်ဘာတွေဖြစ်နေပါလား။ ကျွန်တော်မနေ့က ကျောဘက်ကပြန်လာ
တော့ တွေ့ခဲ့တာတော့ ခြုံတွေရှင်းနေတယ်ဗျ။စည်ပင်ယူနီဖောင်းတွေနဲ့။ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းကြတော့မယ်ထင်တယ်။
ဆရာပေါက်ကိုတော့.. အာဇာနည်တွေရဲ့ကျန်ရစ်သူမိသားစုတွေ.. အနွယ်တွေ.. သာဓုခေါ်မှာသေချာတယ်..။